Medicare ntá»¥kwasá»‹ Medigap na Indiana site 1-800-MEDIGAP | Incline
Share Medicare ntá»¥kwasá»‹ Medigap na Indiana site 1-800-MEDIGAP
Medicare ntá»¥kwasá»‹ Medigap na Indiana site 1-800-MEDIGAP
Medicare Mgbakwunye Atụmatụ na Indiana
Mgbe i nwere Medicare ha ekpuchi 80% gị ụlọ ọgwụ na dọkịta ahapụ 20% n'ihi na ị na-akwụ ụgwọ. I nwere ụzọ ole na ole nke ekpuchi 20%. ị nwere ike ịkwụ nke gị n'akpa uwe, ma ọ bụ i nwere ike inwe ihe a na-akpọ a Medigap plan na-mara dị a Medicare emeju plan.
Gịnị bụ a Medicare Mgbakwunye plan?
A Medicare Mgbakwunye (Medigap) plan na Indiana e mere na-ekpuchi ụfọdụ nke si-nke-n'akpa uwe akwụ ụgwọ jikọtara Original Medicare (Part A na Part B), dị ka ọ na ọzọ na-ekwu. Ndị a na-akwụ ụgwọ ndị pụrụ ịgụnye deductibles, coinsurance, copayments, na ndị ọzọ si-nke-n'akpa uwe mmefu a na ugwo site na-erite. Ụfọdụ Medigap atumatu na-agụnye ahụike mberede elekọta gị mgbe ị na si n'ala. Medicare Mgbakwunye atụmatụ na-ere site onwe ụlọ ọrụ ịnshọransị. Ihe bara uru na-ahụ maka ịkwụ kwa ọnwa adịchaghị maka a Medigap plan, nakwa dị ka adịchaghị maka Medicare Part B. Na 47 na-ekwu, gụnyere Indiana, e nwere 10 etozu Medigap atụmatụ aha ya bụ na akwụkwọ ozi ndị ọzọ a kpọrọ, dị ka Medigap Plan L. Medicare Mgbakwunye atụmatụ nke otu akwụkwọ ozi nye otu uru n'agbanyeghị nke onwe ọrụ inshọransị ịzụtara iwu si ma ọ bụ ebe ị ịzụta ya. Dị ka ihe atụ, Medigap Plan L site na ọrụ inshọransị na Bloomington ekpuchi otu Medicare Part A na Part B si-nke-n'akpa uwe-akwụ ụgwọ dị ka a Medigap Plan L na Gary, ma ọ bụ Medigap Plan L na a dị iche iche na steeti. Ma plan akwụ ụgwọ na nnweta mgbe ịdị iche iche n'etiti ụlọ ọrụ ịnshọransị ma ebe.
Idebanye aha na a Medicare Mgbakwunye plan na Indiana
A ezi oge banye maka a Medigap atụmatụ bụ mgbe gị Medigap Open aha oge (OEP), a ọnwa isii nke na-amalite n'ọnwa na ị bụ afọ 65 na nwere Medicare Part B. Ọ bụrụ na ị debanyere n'oge a, ị ga-enwe a "na-ekwe nkwa inye aka" nabata n'ime atumatu ya bụ, ị ga-abụ n'okpuru ọgwụ underwriting. Ọ bụrụ na ị debanyere mgbe gị Medigap OEP maka a Medigap plan rere nọ n'ógbè gị, na Medigap mkpuchi ụlọ ọrụ àjà atụmatụ pụghị ịgọnahụ ị mkpuchi ọbụna ma ọ bụrụ na i nwere nsogbu ahụ ike. The ụlọ ọrụ nwekwara ike na-ana a elu adịchaghị karịa na ọ ga-a-erite ezi ahụ ike. Ozugbo ị na-debara aha na a Medigap plan, gị mkpuchi na-ekwe nkwa maka mmeghari kwa afọ ma ọ bụrụ na ị na-ada na-akwụ ụgwọ gị kwa ọnwa adịchaghị, ị ekwughị eziokwu na ngwa ma ọ bụ na Medigap ọrụ inshọransị na-aghọ odida ma ọ bụ keukpa.
Ị na-ahọrọ a Medicare Mgbakwunye plan na Indiana
Dị ka e kwuru n'elu, ọtụtụ na-ekwu na-enye 10 dị iche iche nke Medicare Mgbakwunye atụmatụ. Ị pụrụ iji chee echiche banyere otú mgbe i nwere dọkịta nleta na ndị ọzọ na ike na-elekọta ọrụ, ma họrọ a Medigap plan ya; onye ọ bụla lettered plan nwere dị iche iche na ọkwa nke mkpuchi.
Tọọrọ .Media na-ekesịpde na ejikwara n'adabereghị nke anyị ọrụ, a anam-enweghị na-azọrọ na ha viability. Mgbe ọ na-abịa Medicare Mmeju anyị na-atụ aro na ị kpọtụrụ a ikikere Medicare ntụkwasị mkpuchi gị n'ụlọnga nọ n'ógbè gị ma ọ bụ na-akpọ ndị enyi anyị na 1-800- MEDIGAP .
Nke a weebụsaịtị eje ozi dị ka òkù a kpọrọ unu, ndị ahịa, ịjụ banyere ihe ọmụma banyere Medicare Mgbakwunye ma ọ bụ Medicare mkpuchi , na nrubeisi nke ozi ịkpọtụrụ gị werekwa ikike maka gị n'ụlọnga iji kpọtụrụ gị na ihe ọmụma, gụnyere zuru ezu nkọwa na-eri na mkpuchi nke a mkpuchi ma ọ bụrụ na ị chọrọ.
Ọtụtụ n'ime ndị ahịa anyị a, Atiya bụ Ikikere elekọta mmadụ nwere ike ịkpọ gị na-adịghị jikọtara ya na ọ bụ anakwereghị na US Government ma ọ bụ gọọmenti etiti Medicare omume. Medicare enweghị ma enyocha ma ọ kwadokwara ozi dị on a website. Nke a abụghị ihe zuru ezu ndepụta nke atụmatụ dị na ọrụ gị ebe. N'ihi na a zuru ndepụta biko kpọtụrụ 1-800-Medicare ma ọ bụ gakwuru www.medicare.gov (TTY ọrụ kwesịrị ịkpọ 1-877-486-2048), 24 awa ụbọchị / 7 ụbọchị n'izu ma ọ bụ gakwuru www. href = "http://www.medicare.gov"> medicare.gov.
<h4><a href='http://incline.media/Medicare-Supplements/Medicare-nt%C3%A1%C2%BB%C2%A5kwas%C3%A1%C2%BB%E2%80%B9-Medigap-na-Indiana-site-1-800-MEDIGAP/486'>Medicare ntá»¥kwasá»‹ Medigap na Indiana site 1-800-MEDIGAP</a></h4><iframe class='mediaserv_video' src='//embed.mediaserv.solutions/?storagenode=3&filename=tSJenyLm09HpO8DNfCJewfKo0zfbMaIitcJjrw74kxBsaD64mxsmIVHFArP6SuyLumbeRJlNY1oJojKlvfroImMtjWSNDIeeK6LDvVlE0VRvhRmcXuYu1Dzn8DzQteN8gWjG0kDE6FelKTeFhFExyW.mp4&logo=http://incline.media/template/img/default-avatar.png&logo_href=http://incline.media/Medicare-Supplements' frameborder='0' allowfullscreen='true'></iframe><br /><span style='font-size: 10px;'>By <a href='http://incline.media/Medicare-Supplements'>Medicare Supplements</a> on <a href='http://incline.media'>Incline</a></span>